Xildhibaan Cilmi Maxamed Nuur oo ka hadlay muhiimada sharciga dhismaha guddiga la dagaalanka musuq maasuqa – Kalfadhi
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo ayaa shalay saxiixay sharciga dhismaha guddiga la dagaalanka musuq maasuqa oo muddo ka badan laba sanno sugayay saxiix madaxweyne si loogu soo saaro faafinta rasmiga ah una dhaqan galo.
Sharcigan ayaa la filaya in uu wax badan ka bedello ka hortaga musuq maasuqa harreeyay guud ahaan Soomaaliya.
Xildhibaan Maxamed Cilmi Nuur oo kamid ah xubnaha goleha Shacabka oo la hadlay Kalfadhi ayaa sheegay in sharcigan uu muhiim u yahay dhismaha guddiyada kale ee dastuuriga ah.
‘’ Waa arrin u baahan in la boggaadiyo,waxa ay ahayd in mar hore la sameeyo.’’
Yaa sameynaya guddiga la dagaalanka musuq maasuqa ?
Guddigan waxaa soo dhiseysa wasaarada caddaalada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya oo markii hore keentay sharcigan.
Dad badan ayaa weli shaki gelinaya hufnaanta lagu soo dhisayo guddiga la dagaalanka musuq maasuqa.
Warbixinta musuqa ee hey’adda Transparency International ayaa sanadkan lagu sheegay in Soomaaliya ay kamid tahay dalalka ugu musuq maasuqa badan caalamka.
Xildhibaan Cabdirisaaq Cumar Maxamed oo si kulul uga hadlay go’aanka ay dowladda ku hakisay duulimaadka sheekh Shariif sheekh Axmed ee Kismaayo